यात्रा जंगलभित्रभित्रै – मझेरी डट कम
खोला पनि त्यस्तै न छन्, बगुवा बालुवाको, जति चलमलायो उतिउति भासिँदै जाने। थामिने पीँध त कता हो कता! म एकपटक त्यस्तोमा फसेको छु। कसोकसो गरेर निस्कन सफल भएँ। त्यो कुन खोलो थियो, तै नाम बिर्सेछु। तर होइन, त्यै स्याली त हो। राजमार्गभन्दा उत्तरपट्टि। त्यो बेला र यो बेला। स्यालीमा बर्खाको पानी घटेको थियो र पनि पानीको भित्री बेग अझै कायमै थियो। बर्खा बितेको थिएन। माथि आकाशमा बर्सिन तरखराइरहेका घना कालाकाला बादल खापैखाप थिए। खोला पनि भर्खर स्खलित उन्मत्तता सेलाएझैं शिथिल थियो। बालुवा पनि पानीको प्रवाहसँगै त्यस्तैत्यस्तै ढिस्काढिस्कामा रूपायित हुँदै अनेक तरेलीतरेलीमा परिणत भइरहेको थियो। म साइकलमा थिएँ। त्यता साइकलमा भुली गाउँतिरको ट्रिप लगाएर आइरहेको। भन्नु छैन, झन्डै साइकलसहित म त्यो बगुवा बालुवामा धसिएर जलसमाधि लिन नपुगेको। साइकल त गायबै भएको झन्डैझन्डै। जसरीतसरी न्वारनको बल लगाएर थुतेँ त्यसलाई र किनारमा ल्याएर त्यसलाई पनि पछारेँ खोलाको रसि पोख्नलाई र आफू पनि लखतरान चिसो जीउ बर्खाले पिटेको बगरमाथि पसारिएँ।
गाउँ जसलाई म बिर्सन सक्दिनँ र अझै पनि भित्रबाट चिच्याएर डाक्छ, ए आइज न गाउँमा! तर, अब गाउँ छ तर जंगल छैन, अतिक्रमित छ, सखाप छ। मन्त्रीदेखि वन माफियाहरूले क्लिन सेभ गरेका छन् जिल्लाको वन। वन हराएपछि स्रोतहीन खोला पनि बूढा भए, सुक्खासुक्खा उदासउदास बग्छन्। गाउँको सम्झना त आइरहन्छ परदेश लागेको तन्नेरी लोग्नेको यादझैं।
विश्वका समुद्र, पहाड, वनजंगल र आकाश सबैसबै नाप्नु जरुरी छ पैदलै,यस्तो म अझै पनि ठान्छु। त्यही यायावरीय भोक मेट्न म कहिले ट्रेकिङ् गर्थें, चुरेको डाँडाको टुप्पामा बसेको मलासतिर भने कहिले पुग्थेँ जोगबुडासम्म। पहिलेपहिले कहिले हो कहिले खुइलिएर गएको जुगमा जब मान्छे हिँडेरै पुग्थ्यो एक ठाउँदेखि अर्को गन्तव्य। चुरेको थाप्लामा ती बूढाहरूका पाइलाका डाम पहिल्याउँदै र डाँडाकाँडाको एकतमासको भित्री आत्माको सुसेली सुन्दै।
अहिलेको यात्रा हामी, हामी भन्नाले म र अमर, रिछा बजारसम्म पैदलै गइरहेका छौँ। रिछा बजार यो नाम थारू भाषाको हो। म यसको निरुक्ति गर्न सक्तिनँ। बजार कुन हो, त्यो म भनुँला।
त्यो समय गजबको थियो। २०/२५ वर्षअघि मात्र पनिनिर्भय हिँड्नुको आनन्द थियो। साथमा यात्राको डगर (बाटो)को खाका थियो। सिसैयातिरबाट नगएर हामी यता उल्टाखामबाट छिरेका थियौँपैदल। ट्रेकिङ्जस्तो। ट्रेकिङ् नभनूँ। ट्रेकिङ् भन्यो कि मलाई पहाडका गोरेटा, छहरा, खोचखोल्सा आदि भएको वातावरण नै हो भन्ने लाग्छ।
बागफाँटा, उल्टाखामउता चौँधरपारदिेखि जंगल सुरु हुन्थ्यो, चारकोसे। अब त त्यो चारकोसे स्मृतिमाकुँदिएको एउटा नाममा सीमित छ। जंगलहरू विस्तारै किरयिापुत्रीको खौरिएको कपालझैं स्वाहा भइरहेका छन्। हजामको धारलिो उस्तुरा लागेको टाउकोबाट झरेका रौँझैं जंगल कतिबेला हो, निमिट्यान्न भइसकेका छन्यसबेला।
अमर माने अमर डगौरा ! डगौरा थारू। मेरो साथी, सहपाठी। ऊ मलाई लिन आएको छ। ऊ भनिरहेछ, यता बसबाट कलुवापुर-बन्सा हुँदै जाऔँ। बीचमा अरू गाउँ पनि अचेल गजमोरिएका छन्। तिनको उल्लेख यहाँ साध्य हुँदैन तर मलाई सकसक लागिरहेछ कि कममा पनि एउटा यात्रा यतैबाट बनोस्, जंगलैजंगल। उसले कति भन्दा पनि मैले मानेको थिइनँ। अमरले हार खाएर भन्यो, “लौ त, जे भन्छस्।” अब त अमर पनि बूढो भइसक्यो। तर, उसको र मेरो आत्मीयता टुटेको छैन। यो तय भयो, बिहान खाईवरी निस्कने रिछाका लागि। रिछाभन्दा उता लक्ष्मीपुरमा छ अमरको घर। यसबेला जंगलभित्र कुहिरोले डम्म ढाकेको हुन्छ र मान्छेहरूको आउजाउ पनि शून्यप्रायः हुन्छ। त्यस्तोमा एउटा डर पनि हुन्छ कि कतै बाघले हमला नगरोस्। अमरलाई यही डर छ। तर, म मान्दिनँ किनभने मलाई लाग्थ्यो कि अमर साथमा छ भने म बाघको मुखबाट पनि उम्कन सक्छु। मतलब अमर बाघसित लडेर भए पनि मलाई बचाउनेछ। ऊ टार्जन होइन तर टार्जनको वंशज लाग्थ्यो। मैले बाघसित लड्ने अमरको के हुने हो, त्यता सोच्दिनथेँ।
अमरले एकपटक मलाई तर्साउन पनि भन्यो, “त्यो झाडीमा अस्ति भर्खर एक जना मान्छेलाई बाघले खाएको हो। माँ कसम !” मैले भनेँ, “छोड्दे यार, नतर्सा। बाघ मूलाले के नै पो गर्ला र?”
जंगलको एउटा दुर्निवार आकर्षण हुन्छ। मतलब घना जंगल त्यो पनि सालका रूखैरूख। एकपछि अर्को रूखले टम्म भरिएको जंगलभित्र पसेपछि र बीचमा त्यसका जराहरूमाथिबाट नै पनि जाने गाडाको लिकमा वा गोरेटामा हिँड्हिँड्दै अर्कोपट्टि निस्कने आनन्द र रोमाञ्च अर्कै हुन्छ। हुन्छ होइन हुन्थ्यो किनभने मैले यात्रा गरेको त्यो जंगल अब छैन, बूढाको थोते मुख भएको छ त्यो भाग।
अगाडि चौँधर थियो। यसको बगरबगरमा तरकारी खेती गर्ने चलन सुरु भइसकेको थिएन।
चौँधर तरेपछि हामीले सोझै त्यही बाटो समात्यौँ, जुन जंगलभित्र आलस्य लाग्दो गरी छिरेको थियो र त्यसमाथि हामी हिँड्दै थियौँ अनामन्त्रितझैं। बाटो यति मौन थियो मानौँ व्यथित भएर भनिरहेको थियो, “फर्कफर्क। यो अज्ञाततिर कता जान्छौ?” “अरे यार यसमा के छ र, जंगल त हो! जाडोको जंगल !” मैले आफैंलाई सम्बोधन गरेँ। मनमा कताकता भयको आशंका पुत्ताउन थालेको थियो। तर, भित्र एउटा रमाइलो अनुभूति पनि भइरहेको थियो कि आखिर म जंगलको बाटैबाटो यात्रा गररिहेछु। “साला पागल होस् तँ !” अमरले भित्रको डर व्यक्त गर्न फुसफुसाएर भन्यो।
जंगलको सान्निध्यमा मन रमाइरहेको पनि थियो। डर मात्र यस कारणले थियो, जाडोको क्षीण उज्यालो छिर्न सकेको थिएन। अलि पर अँध्यारोअँध्यारो लाग्थ्यो। एउटै चरो पनि बोलिरहेको छैन। यसभित्र हरनि र ढेँडु बाँदर देखिन्थे। आज अझै जागेका छैनन् कि ती अन्यत्र कतै चर्न गइसके ! सुनसान लागिरहेछ। जंगलको भयोत्पादक प्रभाव। जंगल मत्त थियो। समय यही हो, जंगल मात्ने। गर्मीमा त यो पात झरेर नांगै भएको हुन्छ। हपक्क पोल्ने पनि भएको हुन्छ। गर्मीमा पनि जंगलको तमथतमाइलो सौन्दय हुन्छ। सुकेका सुनौला पात भुइँभरि ओच्छिएका हुन्छन्। तर, त्यस्तोमा यात्रा खासै सम्भव हुँदैन। यात्रा त अहिले पनि त्यतिविधि आनन्ददायी छैन। तर, म खुसी छु कि जंगल छिचोलेर हामी अघि बढिरहेछौँ र बाटो हामीभन्दा अघि लागेर हामीलाई गन्तव्यतिर डोर्‍याइरहेछ।
“अर्कोपटक हामी, बुझिस् ऊ उताको चुरेतिर जाने।” मैले उत्तरतिर हातले इसारा गरेर भनेँ। मलाई यो सेरोफेरो जम्मैको तिर्खा छ। म एकएक पाइला हिँडेर यस ठाउँलाई नाप्न चाहन्छु। पैदलैपैदल। म यो ठाउँको एकएक खोलानाला, रूखपात, ढिस्का, गाउँगोरेटा र घरछाप्राका मान्छे एकएकलाई चिन्न चाहन्छु। म पिउन चाहन्छु, यसैको गन्धलाई, यही साल वनको सुसाइलाई आफूभित्र भर्न चाहन्छु, मीठो गीतझैं। उसै पनि पैतलामा चक्र छन् र मभित्र डुलुवा पसेको छ, यस्तो लाग्छ मलाई। पैतालाका चक्रले नै बेलाबेलामा जंगलजंगल गाउँगाउँ हिँडाइरहन्छ।
यात्राको पहिलो चरणमा हामी इमलिया पुग्यौँ। गाउँ जागिसकेको थियो। इमलियामा अमरका काका थिए। उनकामा पसेर हामीले बिहानै भए पनि दुईचार खोरी (दुनो) जाँड खायौँ। चमेना त्यही हुन्थ्यो। पहिले भएको भए सिमठारी चामलको जमोठ भातको डल्लो भुङ्रोमा पोलेर खाइन्थ्यो। तर, त्यो जातको धान अचेल लुप्त भइसकेको छ। कति जातका धान विलुप्त भइसकेकुन्नि? त्यसको सम्झना छैन। अर्को एउटा गुर्रा थरीको धान थियो, जसको बास्ना अति नै मीठो हुन्थ्यो। त्यो धान पनि हरायो। मानवसभ्यताको यात्रामा त्यस्तात्यस्ता धानका जात कति हराए, हराए। इजिप्टको तुतनखामनको चिहानमा कतै ती धानका बीउ भेटिएलान्? कसले भन्न सक्छ कुन सभ्यता कुनसित गाँसिएको छ? तर, नागर सभ्यताको विकास र परविर्तनमा यस्ता धान र चामलका कुरा कसैले वास्ता गर्दो रहेनछ। पैसा कमाउन पाए पुग्छ। हामी प्रविधि महासभ्यताको यात्रामा छौँ तर पनि यस महासभ्यताको पीँधमा मेरो त्यो जंगल यात्रा अझै आलैताजै छ। म बाँचुन्जेल कुनै पनि प्रविधिले यसलाई विस्मृत गराउन सक्दैन।
इमलिया जागिसकेको छ। त्यहाँ गाउँले घरअगाडि वा ओसारोमा पातपत्कर, झिंजादाउरा बटुलेर ठूलै मूढो जोतेर आगो तापिरहेछन्। गाउँलेहरूको जीउमा मैलो धुस्सा वा एकसरो बर्को छ वा त्यो पनि छैन। फाटेको मयलले कालो पल्टिएको स्यान्डो गन्जी छ र एउटा कच्छा। जीउमा ध्व्ााँसोको गन्ध छ। हामी पनि एकछिन त्यहीँ घुस्रेर हात र जीउ सेक्छौँ र अघि बढ्छौँ। एकातिर ओसारोको ढिकीमा धान कुटेको जीवन्त स्वर पनि सुनिएको छ। आज सखारै धान कुटिएनछ होला। कुटेको धान निफनेको पट्याँसपट्याँस पनि सँगसँगै भोक जगाउने गरी आइरहेछ।
गाउँ यस किसिमले जागेको छ कि माउ कुखुराका वरपिरि चल्लाहरू चिर्बिराउँदै चारो टिपिरहेका छन् र चनाखो माउ आमाको दायित्व निर्वाह गरेझैं क्वाँटक्वाँट गर्दै वरपिरि आसन्न आक्रमणको खतराबाट सन्तानलाई जोगाउन घाँटी ठाडो पार्दै यताउति टाउको घुमाएर हेररिहेकी छ। गाईगोरुहरू अझै फुकाइएका छैनन् तर स्कुल जानेहरू अलि सलबलाएजस्तो छ। डुल्न निस्केको मात्र थिएँ म। यसलाई छोटो यात्रा भनिदिँदा हुन्छ। मात्र यात्रा निर्वाहको यायावरीय हुटहुटी। हामी भात खाने बेलासम्म लक्ष्मीपुर पुग्छौँ होला। तर, यात्रा अझै धेरै शेष छ भनेर दर्शन छाँट्नुपर्ने बाटो विकट पनि छैन। घाम नलागे पनि उज्यालो मनग्गे भइसकेको छ। टाढा कता हो फँडानीकटानी भएका जंगलका शव ओसार्ने वाहन डुक्रेको आवाज यहीँ पनि सुनिँदैछ। यात्रामा कुनै जलविहीन मरुभूमि, समुद्र, हिमाल, तीर्थ, गगनचुम्बी भवन, अट्टालिका, ऐतिहासिक स्थल त्यस्तो केही पनि आकर्षण थिएन। तर, दुर्निवार आकर्षण थियो।
जाडोको समय। यस भेकका खोला, वषर्ात्को पानी निथ्रेर सुस्तसुस्त बगिरहेका खोला। खोला पनि त्यस्ता ऐतिहासिक होइनन्, जसका छेउमा सभ्यताहरू विकसित वा विनष्ट भएका होऊन्। म सोच्दै हिँडिरहेछु। यो एउटा अज्ञात क्षेत्रजस्तो छ। नयाँ मुलुक भनिए पनि नयाँ खोज्न कोही पनि आउँदैन। डीडीटी छर्केर उन्मूलनअघि औलोको डर थियो। मान्छे कामज्वरोले थला पर्थे र उपचारविहीन मर्थे। भाबर भनिने यो विपुल जंगलका धनी अचेल दीनहीन छन्। साल, सिसौ र खयरको धनी यो सुनखानी ठहरयिो। यसको चोरीकटानी धनीले पनि गर्‍यो र गरबिले पनि, विद्रोहीले पनि गर्‍यो र राज्यले पनि। यो अचेल टाट पल्टेको छ। टाट जुन जुवाको खालमा ओछ्याइन्छ र खाल उठेपछि टकटकाइन्छ, त्यो अर्थलाई यसले मूर्त गरेको छ। धन अर्कैले कुम्ल्याएका छन् र यहाँका आदिवासी थारू आदिकालभन्दा पनि झन् तन्नम भएर बाँच्न बाध्य छन्।
हामी फेरि जंगलभित्र छिर्छौं।
जंगल अघिभन्दा बढी जागिसकेको छ। अघिभन्दा उज्यालो पनि भएको छ। भित्रभित्र जंगलले हामीलाई स्वीकार गर्दै गएको भान हुन्छ। बाटो गोरेटो छ। हामी गाडाको लिक छोडेर गोरेटोबाट हिँडिरहेछौँ। छोटकरी। अमर यस जंगललाई आफ्नो घरको चोटाकोठाझैं चिन्छ, जान्छ पनि। जंगलले पनि उसलाई चिन्छ, आफ्नै सन्तानझैँ।
दक्षिण च्यापेर हामी हिँड्दैनौँ। त्यो हाम्रो दिशा होइन। त्यहाँ अझ घना जंगल छ र दक्षिणतिर सिमानामा महाकाली नदी पनि बग्छ। अहिलेलाई मलाई जंगलकै बाटो रमाइलो लागिरहेछ।
यात्राभरि जंगललाई भित्रभित्रै स्मृतिमा उतार्नु पनि छ, रिछा, अचेलको बेलौरी बजार नपुग्दासम्म ।
नेपाल साप्ताहिक अंक ४१२